सरकारका पूर्व सचिव पत्नी मुना कार्की ह’त्याका’ण्ड : यस्तो आयो अहिलेसम्म कै डरलाग्दो नयाँ रिर्पोट – Voice Samachar
आइपीएल आज सुरू हुँदै, उद्घाटन खेलमा चेन्नई र मुम्बई भिड्दै
मुख्य पृष्ठ /Video/सरकारका पूर्व सचिव पत्नी मुना कार्की ह’त्याका’ण्ड : यस्तो आयो अहिलेसम्म कै डरलाग्दो नयाँ रिर्पोट
सरकारका पूर्व सचिव पत्नी मुना कार्की ह’त्याका’ण्ड : यस्तो आयो अहिलेसम्म कै डरलाग्दो नयाँ रिर्पोट
6,790 1 minute read
काठमाडौं । अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती मुना कार्कीको ह’त्या प्र’करण नयाँ मोडमा पुग्ने देखिएको छ । अहिले बाहिर आएको जानकारी अनुसार कामदारले ज’बरज’स्ती क’र’णीको प्रयास गरेको आशंका गरिएको छ । उनकै घरमा कामदार रहेका विजय चौधरीले ज्या’न लि’नु अघि कार्कीमाथि ज’बर्ज’स्ती क’र’णीको प्रयास गरेको प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीको रहेको छ ।
मुनाले त्यसको प्र’ति’कार गर्दा उनको ज्या’न लि’इएको प्रहरीले आशंका रहेको छ । चौधरीको जी’वनत्या’गपछि भेटिएको पा’इन्टमा वी’र्य भेटिएको प्रहरीले दावा गरेको छ । यद्यपि, प्रहरीले ला”शलाई पो’ष्टमा’र्टमका लागि अस्पताल लगिसकेकाले चिकित्सकको रिपोर्टले नै सबै कुरा बाहिर ल्याउने जानकारी दिइएको छ । सोमबार बिहान भएको उक्त घटनामा उनकै घरमा कामदार रहेका विजय चौधरीको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ । घरमा रहेको सीसीटीभीको भिडियो फुटेज अध्ययन गर्दा चौधरीले नै कार्कीमाथि ह’म’ला गरेको खु’लासा भइसकेको छ ।
सोमबार बिहान ११ बजे घटना भएको हुँदा धेरैलाई जानकारी हुन सकेन । सबैको काममा जाने समय भएको हुँदा घटनाबारे धेरै जानकार भएनन् । सोमबार घटना भएको समयमा अजुर्न कार्की मन्दिर गएको बताइएको छ । दुई छोरीहरु नेपालमा छैनन्, र छोरालाई लिएर चालक विद्यालय गएका थिए । यो समयमा घरमा चौधरी र मुना कार्की मात्रै थिए । उनीहरुबीच के भयो ? कसरी भयो ? भन्ने कुरा प्रहरीको लागि अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
छिमेकी रहेकी नेकपा सांसद कोमल ओलीले घटना दुःखद भएको भन्दै मान्छे आफ्नै घर भित्र पनि अ’सुर’क्षित हुनु सबैका लागि चुनौती भएको बताउनु भएको छ । लामो समय निजामती सेवामा काम गरेका कार्कीको जन्मस्थान जिरी दोलखा हो । उनी लामो समय देखि पाटनमा बस्दै आइरहेका थिए । केही वि’वादा’स्पद घटनाहरुमा कार्कीको नाम जोडिएर आएको छ ।
दाइको ससुरालीमा गोठालो बसेका यी बालकलाइ रेशम बोहोराले कालिकोटबाट काठमाडौं किन ल्याए
रामकृष्ण ढकालको डिर्भोस बारे वकिलकाे रहस्यमय खुलासा : भन्छन – अदालतको रेकर्ड अनुसार उनीहरुको डिभोर्स भएकै हो, आखिर के हो त वास्तविकता (पुरा भिडियो)
अब प्रचण्डको टाउकोमा ब*म बर्सिन्छ, हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र योग्य हामी कसरी अयोग्य कमरेड ? (हेर्नुस् भिडियो)